GoAnimate Inowedzera Enterprise, Whiteboard, uye Infographic Vhidhiyo Zvimiro | Martech Zone
China, June 19, 2014 China, June 19, 2014 Douglas Karr
Vashambadziri vanoona kuti mavhidhiyo anotendera kubatana kwemanzwiro uye kutsanangudza mavhidhiyo ari masekondi makumi matatu kusvika pasi pemaminetsi maviri inzira inonakidza yekuunganidza pfungwa nekuvandudza mitengo yekutendeuka. Vhiki rapfuura chete, shamwari Andrew Angle yakamira hofisi yedu uye akatiudza manakiro aaiita nekushanda naye Goanimate uye kuti aigona here kana kwete.
Mazuva mashoma gare gare, ndanga ndichiona kuratidzwa kuri kurarama (kubva kuCOO Gary Lipkowitz) yeGoAnimate's new whiteboard animation uye vhidhiyo infographic madingindira anga awedzerwa kuchikuva chekugadzira anotsanangura mavhidhiyo uye animated infographics.
Kana iwe wakamboshandisa vhidhiyo yekugadzirisa chishandiso kana Flash, mushandisi mushandisi weGoAnimate ingori yakasimba, chete nezviuru zvevamwe mavara, zviitiko, zviito uye sarudzo. Panzvimbo pekunyora nekuenderera mberi nezvazvo, rega vhidhiyo iite tsananguro.
GoAnimate Mhuka Infographic Mavhidhiyo
Iyi vhidhiyo yemaminetsi maviri kubva kuGoAnimate on kuburitsa infographic vhidhiyo:
Heanoi a Goanimate infographic vhidhiyo rinopfuura kwemineti refu rakagadzirwa nemumwe wevashandisi veGoAnimate:
GoAnimate Whiteboard Mifananidzo Kutsanangura Mavhidhiyo
Uye heino Goanimate chena bhodhi vhidhiyo mifananidzo yakagadzirwa nemushandisi paSouth African Reserve Bank:
Kana iwe uchida kutanga kutanga Goanimate, Ini ndaikurudzira iyo kushanda kuunganidzwa kwezvinyorwa, mifananidzo uye mavhidhiyo kuti GoAnimate yanga ichivandudza kubatsira vashandisi kuburitsa nyaya yavo pasi.
GoAnimate Enterprise, Chikwata uye Kubatana Zvimiro
ikozvino Goanimate yakawedzera zvishandiso zvayo ne GoTeam kupa Enterprise suite uko iwe kwaunogona kukoka vanobatsirana nevanoongorora, kugovera manotsi netiweki, uye shanda kumavhidhiyo sechikwata!
Zvakanakisa zvezvose, Goanimate inoenderera nekuwedzera matani emifananidzo mitsva kuunganidzwa wayo wevashandisi vhiki rega rega. Uye ivo vanototeerera zvikumbiro kubva kunharaunda yavo.
Tags: andrew anglevhidhiyo yehupenyuanimated vhidhiyo kubatanaanotsanangura mavhidhiyoGary Lipkowitzgoanimateinfographic mavhidhiyovhidhiyo infographicwhiteboard mavhidhiyo